Author: Yogis Mikajora
Odaan Bultum kaarra Qurquraarraa gara kibbaatti hamma km 3 fagaatee argama. Hariiroon kun dura sadarkaa maatii keessatti gad dhaabbate. Waan sirna kana keessatti tahan hundi akka aadaafii amala biyyaatti fudhatamee kabajama.
Sadarkaalee Gadaa garagaraakeessatti ilmaan Oromoo dirqama dalagaa adda addaatu isa eeggata. Gaggeessa Gadaa miseensa fi Marsaa Gadaa: Ilmaan kormaa sadarkaa kana: Arsii keessatti- Miseensa jedhama. Share Email Print Facebook. Eega, hawaasa keessatti Gadoomuuf carraa kan qaban ilmaan kormaa thuu hubanne.
Eegaa, kun aadaa amantii sirna Gadaa keessaa isa tokko. Sadarkaan kun, Tuulamaafi Ituu keessatti yeroo itti ilmaan kormaa aangoo qabachuuf ofqophessan, sadarkaa 4ffaa tahuudhaanifi dirqama loltummaa qabaachuudhaan tokko yoo tahan kaanirraa kanaan adda bahu. Dalagaa kanaafi kana fakkaatanitti haa bobbahan malee, sadarkaa kanatti tohannoo warraa ala hin bahan. Akka mangoddoonni Booranaa himanitti Gadaa jaaruuf yaalii dheeraan eega godhame booda, Gadaan yeroo dheeraaf bifa hojechuu dandayu dhaabbate.
Sadarkaa Dooramaa Booranaa keessatti iddoo lamatti qoodama. Inniniis waaqa jedhamee yaamama. Akka aadaan sirna kanaa hin dabnefi seerriifi heerri sirnichaa hin banne qaceelcha.
Haa tahuu malee, warri keessaa gurguddaa tahan nijiru: Kanaaf, sadarkaadhaan bakka itti garaagarummaan jiru tokko kana taha. Haalli hawaasni Oromoo bara Gadaa duraafi booddee keessa ture calaqqiinsa akkaataa bulmaata isaa ka duraanii nuuf ibsuu ni dandaya.
Waggaan saddeettan Gadaa tokko maqaa mataa isaa qabaata. Amaarri gara hallayyaafi holqatti galtee dhokatte. Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu.
Qaalluun isa oliiti jechuudha. Jechuudhaan warra lubbuun hafanitti dhaammate. Oromoonni karaa Qaalluu Waaqaan walqunnamuu malee, akkaataa biraas niqabu.
Maddi jechichaa illee Itoophiyaa keessa akka hintaane seenaan ni addeessa. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. Inniniis waanuma hangafummaafi quxxusummaa hawaasa Oromoo keessa turerraa tahuun nimala.
Uunkaa jireenya hawaasaa Hawaasa keessatti dhalli namaa kophaa hinjiraatu. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. Gaafa Afaan Oromoo dubbachuufi ani Oromoodha jedhanii ofwaamuun mootummaa habashaa yeroo sanaatiin hin eeyyamamnetti, Ormoonni lagaafi gosaan garaa gara akka hinbaane gochuudhaan Oromummaan akka gadi dhaabbatu hiriyootasaa waliin nama dalagedha.
Boorana keessatti ayyaana Guduruu buufachuufi qumbii walirraa fudhachuu. Hamma Gadaan dagaagutti akkaataan bulmaata Oromoo sirna kanaan ture. Gadaa tokkicha maqaa adda addaa qabaatu. Nabii — Kan abbootiiti.